Rohingya Students Forum: September 2017
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသား သောမာစ် ဘေအတီ
Thomas Trace Beatie သည် ဇန္နဝါရီ ၂၀၊ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ဟားဝိုင်းယီ ပြည်နယ်၊ ဟိုနိုလိုလို တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ မိခင်မှာ ဆန့်ဖရင့်စစ်ကိုမှဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်၊ အီရီခ်ျ၊ စကော့တီခ်ျ၊ ဝေ့လ် မျိုးနွယ်စုမှ ဆင်းသက်လာသူဖြစ်သည်။ ဖခင်မှာ ကိုရိယား၊ ဖလစ်ပိုင် မျိုးနွယ်မှ ဆင်းသက်လာ သူဖြစ်ပြီး ဟဝိုင်းယီမှာ ကြီးပြင်သူဖြစ်သည်။ ဘေတီသည် ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်တွင် အမျိုးသမီး မော်ဒယ် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Miss Hawaii teen USA ပြိုင်ပွဲ၌ နောက်ဆုံးအဆင့်အထိ ရောက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူသည် အမျိုးသား တီဗီ အစီအစဉ်များတွင် ကိုယ်ကာယ ပညာပြအဖြစ် ပုံမှန် ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ နောက်တွင် Bodybuilder တစ်ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ဟာဝိုင်ယီ တက္ကသိုလ်မမှ ကျန်းမာရေး သိပ္ပံဘွဲ့ရယူ ခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ ခုတွင် အမှုဆောင် အမ်ဘီအေ ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် Define Normal အမည်ဖြင့် အထည်ကုမ္ပဏီ တစ်ခု တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ထိုကုမ္ပဏီ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် ရုပ်ရှင်များမှာတောင် မြင်တွေ့ရလေသည်။ သူသည် ကိုယ်ကာယ ခုခံပညာတွင်လည်း အမည်းခါးပတ် ဆွတ်ခူးဖူးသူဖြစ်သည်။
အသက် ၂၃ နှစ် ၂၀၀၂ခုတွင် လိင်အင်္ဂါ ခွဲစိတ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ သို့သော် ကိုယ်အတွင်းပိုင်း မျိုးပွား အင်္ဂါကို ပယ်မထုတ်ဘဲ နဂိုအတိုင်း ထားခဲ့သည်။ သူ၏ အထောက်အထားများ၊ မှတ်ပုံတင်များ မှန်သမျှတွင် လိင်ကို မိန်းမမှ ယောက်ျားအဖြစ် တရားဝင် ပြောင်းလဲလိုက်သည်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်နေ့တွင် Nancy Gallaspie နှင့် ဟာဝိုင်ယီ ဓလေ့ထုံးစံအရ တရားဝင် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူတို့ Bend, Oregon သို့ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈မှ ၂၀၁၀ထိ သူ၏ သား သုံးယောက်ကို ဖွားမြင်ခ့လေသည်။ ၂၀၁၂ ခုတွင် Nancy နှင့် ကွာရှင်းခဲ့ သည်။
January 20, 1974 (age 43)
For More Information click on this.
Posted by Rohang king at 9:16 AM
ပလက်စတိပ် ပုလင်းခွံနဲ့ အိမ်လှလှ တည်ဆောက်တဲ့ ဗိသုကာပညာ
စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သော ပလက်စတိပ် ပုလင်းခွံများနှင့် အင်္ဂတေဖြင့် အိမ်၊ အဆောက်အအုံ တွေ တည်ဆောက်ထားပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ကြည့်ရှုပြီး ကိုယ်ပိုင်အိမ်တလုံး ဖန်တီးနိုင်အောင် ကြိုးစားကြမယ်…
Posted by Rohang king at 2:35 AM
1. Nun sára sálon
Arang sára mal
Murula ola faní
Dan sára zat
Hoq nosinédé mia
Fokkor bicí fara
Nitti gore éckéra.
2. Futzii sára beri
Cárit sara ustat
Sáñti sára mia
Dheil Fata sára gas
Andha nofarede faik
Kodor nogoré bec mancé.
3. Hákem sará dec,
Acámi sára insaf
Fondit noodé ukil
Bail nozanéde gótok
Kitaab nozanede fir,
Gobá sára foótiwala
Moddima bekar za.
4. Baf-maa sára fuwa
Bou sára bera
Giros sára gulam
Bouta sára real
Fáida node mocur noo.
5. Dón lailé dan goró.
Cántí lailé ebadot goró.
Bíyosto lailé Allah hókum mano.
6. Baicá yo ádama gorí nodiyó
Oin oré yó baki noraikkó.
Adama gorí baicá dilé duk fafore,
Biki oin rakílé baré.
7. Nodi óre noloíc,
Fusár noloilé nohoíc
Nodaki oré nozaic
Galot nodi nohaíc
No fagi té nosiríc
Doró noilé nofiníc.
8.Mancór re zat
No ré fasá
Sal oré dañcá.
9. Norom ot fáiyoñg
Bútat furan do
Mone mone monot raic.
10. Bab-maar hotár baáror fua
Ukil sára moddima
Kún or baáror háñti
Hañsa síra luñgi
Sók no boiyé dé ara
Legam sára gúra
Ail sára kuñrá
Hañsa sira lai dikká
11. Kuñiregagguai san no áñzé
Takká boyare tóm no lore
Tel mazi lé murá no éle
Bus dilé feth no bóre.
12. Háile boré feth,
Nam fárile fúne bec,
Tuwailé faá lot,
Dekilé fare siní
Noiya óile o sáf
Tani le neale
Zailé sine foñt.
13. Warinna dhol ot áñsúra duk
Ducmon taile táka duk
Gorba nici ailé gúmza duk
Balur sorot haiñ mara duk
Fut zii horaf sára duk
Hala manuic háñza duk
Hala haittiá nisá duk
Di baáde luwa duk
Báñga hoñot façá duk
Nam farilé búza duk
Collected. By RohangKing
Posted by Rohang king at 2:12 AM
Labels: literature, poem, Rohingyalish
Górot AI-BORKO notáke dé hamမိမိနေအိမ်၌ဗရ်​ကသ်​မဲ့​စေ​သော အချက်​များ
1. Hái baáde basón hoddá no duí félai eron.
[ စားသောက်ပြီး အိုးခွက်ပုဂံများကို အချိန် ကြာမြင့်စွာ မဆေးပဲထားခြင်း။]
2. Góror murobbi ré niróc zagat rakon.
[အိမ်ထောင်ဦးစီး လင်ယောက်ျားအား နိမ့်ကျသော နေရာတွင် ထားခြင်း။]
3. Bibi ré den dákottún rakón.
[မိမိဇနီးသည်အား ညာဖက်တွင် အိပ်စေခြင်း။]
4. Háiya basón hoddá ré félai éron.
[စားသောက်ပြီးသော အိုးခွက်၊ ပုဂံများအားလွှင့်ပြစ်ခြင်း။]
5. Bát salón randí bíiccót gana goon.
6. Mogorif or ottót gúm zoun.
7. Mogorif or ottót muk bací maton.
8. Beil no ulité baki magitó aiyón.
[နေမထွက်ခင် ကြွေးပေးကြွေးယူ ကြွေးတောင်း ခံရခြင်း။]
9. Beil uçá-gólar ottót uin basón.
10. Beil uçá-gólar ottót fuwain maron.
11. Beil tikot januwar zorgorón.
[နေမွန်းတည့်ချိန်တွင် တိရိစ္ဆာန်များအား သတ်ဖြတ်ခြင်း။]
12. Beil uçá-gólar ottót cáb doun.
13. Mogorib or ottót maiya fuain sul eridi baáré nealon.
[အမျိုးသမီးများ မိုးချုပ်ချိန် ဆံပင်ဖားလျားဖြင့်​ အပြင်သို့သွားခြင်း။]
14. Maiyya fuwainnór hoñsara jinís baándat rakón.
[အမျိုးသမီးများ၏ မသန့်ရှင်းသော ပစ္စည်းများ အိမ်ဦးခန်းတွင် ထားခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း။]
15. Nizor hoor, támi lói muk fusón.
16. Góror duwar ottú fissá gólon.
17. Muk no dúi hána hoon.
[မျက်နှာမသစ်ဘဲ အစာ စားခြင်း။]
18. Gaár nok, keñc ar honsara jiníc góror bitór félon.
[မိမိ၏ခန္ဓာကိုယ်မှ အမွှေးအမျှင်နှင့် မသန့်ရှင်းသော ပစ္စည်းများ အိမ်အတွင်း စွန့်ပစ်ခြင်း။]
19. Hái-fanír mothka háilla rakon.
[သောက်ရေအိုး ရေမရှိဘဲ ခန်းခြောက်နေခြင်း။]
20. Hái-faní lói bát faát doun.
[သောက်ရေအိုးမှ ရေကို ထမင်းဟင်းချက်ရာတွင် သုံးခြင်း။]
21. Hócom lói fit di gumzon.
22. Fuwain ar bibi ré tiyañ foica ar nasta usta mela mari doun.
[သားသမီး၊ ဇနီးကို လင်သားကငွေသို့မဟုတ် အစားအစာပစ်ပေးခြင်း။]
23. Hoor ulda finón.
24. Góror duwarot fithdi boiyón.
25. Bát hái hái zúron.
26. Bátor fen merit galon.
[ထမင်းရည်ပူအား မြေကြီးပေါ်သို့ တိုက်ရိုက်ငှဲ့ခြင်း။]
27. Góror muúntú gura fuwain nóre baré niyabon.
[အိမ်၏ မျက်နှာစာတွင် ကလေးငယ်ကို အပေါ့အလေး စွန့်ခိုင်းခြင်း။]
28. Hórat magoya ókkol oré gail di duñron.
[မိမိအိမ်သို့လာရောက် အလှူခံသော တောင်းစားသူများကို ဆဲဆိုလွှတ်ခြင်း။]
29. Tattit hána hon.
30. Bason, hoddá baijjai gana gon.
[အိုးခွက် ပုဂံများကိုတီး၍ သီချင်းဆိုခြင်း။]
31. Góror muúntú támi, eskat fúwatdon ar kúli rakon.
[အိမ်ရှေ့ တည့်တည့်တွင် ထမီစကတ်များကို လှန်းခြင်း၊ ချွတ်ထားခြင်း။]
32. Fallua januwar oré adár nodi baní rakón ar baijjon.
[မိမိအိမ်တွင် မွေးမြူထားသော တိရိစ္ဆာန်များအား အစာမကျွေးဘဲ လှောင်ထားခြင်း၊ ရိုက်နှက်ခြင်း။]
33. Bát hái hái git gon.
[ထမင်းစားရင် သီချင်းညည်းခြင်း ဆိုခြင်း။]
✰ ✰✰ ✰ ✰✰ ✰ ✰
Posted by Rohang king at 7:00 AM
Front cover of Yadana Shwe Mre
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မတိုင်မီက မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်၌ အမှူးထမ်းခဲ့သူ မောရစ်ကောလစ် ၏ The land of the Great Image ကို ဆရာကြီး ဦးလှဒင်က ဘာသာပြန်ဆိုထားသော စာပေဗိမာန် စာပေဆုရ ရှားပါး စာအုပ် တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ ဝတ္တု၏ ဇာတ်ဆောင် မှာ ခရစ်ယာန် ဘုန်းကြီး Friar Sebastiao Manrique ဆိုသူဖြစ်သည်။ ခရစ်နှစ် ၁၆၀၀ ကျော် ခေတ်က အိန္ဒိယ၊ အာရ်ကာန် ဒေသတို့၏ အခြေအနေကို ပေါ်လွှင်အောင် ဖော်ပြထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဒေါင်းဆွဲယူရန် အောက်ပါ လင့်ခ်ကို နှိပ်ပါ။ File size 1.7 Mb သာရှိသည်။
DOWNLOAD YADANA SHWE MRE. Pdf
Labels: ရိုသမိုင်း, books, History
Mortú Zimma Asé
Caáyer ekzon no óilé yó
Aññár vukor bútor tun
Fárí nealer dé súr ólóré
Fot banai thani dibar
Mortú zimma asé.
Komi báfoyá no óilé yó
Bab dadar dinna miras
Noiya Sanda meçirlá
Thuça ói áñzi nozafán
Faride dákorttun kucíc goríbár
Fakka dindar no óilé yó
Jahéli, bedaáti, munafékir hañsat
Din or noccá fúlor thúñggá
Íra no ófán sóñlíbár
Sep 27, 2017, 5:54 PM
Asé = ရှိသည်။
áñzi nozafán = ပျောက်မသွားအောင်
bedaáti = ထုံးသစ်မှီခြင်း။ အယူလွဲမှု။
Caáyer = ကဗျာဆရာ
dindar = ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းသူ
no óilé yó = မဖြစ်ရင်လည်း။
Vuk = ရင်ခွင်
Fárí nealer dé = ပေါက်ထွက်နေသည့်။
Fakka = ပြည့်ပြည့်စုံစုံ။
Faride = နိုင်ရာပိုင်ရာ။
Fot = ကာရန်။
hañsat = ကမ်းပါးမှာ။ အနားမှာ။
Íra = ညိုးနွမ်းသည်။
Jahéli = အသိဥာဏ်ခေါင်ပါးမှု (မောဟ)
Komi báfoyá = အမျိုးသားရေးဝါဒီ
miras = အမွေ။
Mortú = ငါ့မှာ
Munaféki = ငြင်းပယ်မှု။
Noccá fúl = ကံ့ကော်ပန်း
Noiya Sanda meçirlá= ဆန်းသစ်လ မြေ (အာရ်ကာန်)
ólóré = ókkol oré.(တို့ကို)
sóñlíbár = ကာကွယ်ရန်။
Súr = သံစဉ်
Thuça = အစိတ်စိတ်အမြွှာမြွှာ
thúñggá = အငုံ။
Zimma = တာဝန်
ကမ္ဘာ့ အလေးချိန်အများဆုံး အမျိုးသမီး အာဘူဒါဘီ ဆေးရုံတွင် ကွယ်လွန်
အီဂျစ်နိုင်ငံသူ ကမ္ဘာ့အလေးချိန်းအများဆုံး အမျိုးသမီးသည် အဘူဒါဘီဆေးရုံ ၊ ယူအေအီ၌ အလေးချိန်လျော့ချရန် ဆေးကူသမှုခံယူနေစဉ် နှလုံးနှောက်ယှက်မှု၊ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးသွားမှုကြောင့် တနင်္လာနေ့တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။
ဆရာဝန် အယောက် ၂၀ ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် ကုတင်စီး အီမာန် အဟ်မဒ် အဗ္ဗူလ်လတီပ် (၃၇ နှစ်) အား မေလတွင် ဗြုရ်ဂျေလ် ဆေးရုံ[Burjal Hospital]၌ ရောက်ရှိခဲ့သည့် အချိန်မှ စ၍ ကုသပြုစုလာခဲ့သည်။
အိမာန်အဟ်မဒ်သည် အစတွင် အီဂျစ်နိုင်ငံ၊ အလက်ဇန်းဒရီးယားမြို့မှ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မွမ်ဘိုင်မြို့သို့ အထူး အသင့်စီစဉ်ထားသော လေယာဉ်ဖြင့် အလေးချိန်လျော့ ဆေးကုသမှုခံယူရန် ဖေဖော်ဝါရီ အစပိုင်းတွင်း ထွက်ခွာလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
သူသည် ရောဂါရှုပ်ထွေမှုကြောင့် လေယာဉ်ပျံဖြင့် ခရီးထွက်ခွာရန် အချိန်အတန် စောင့်ခဲ့ရသည်။
သူသည် အဝလွန်ကဲ၌ လမ်းမလျှောက်နိုင်သဖြင့် အိမ်မှ အပြင်ထွက် မနိုင်သည်မှာ ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခု လောက်တောင်ကြာ မြင့်ခဲ့သည်။ သူ့အလေးချိန်မှာ (၅၀၀) ကီလိုဂရမ်ခန့် (ပေါင် ၁၁၀၀) ရှိခဲ့သည်။
သူ၏ အိန္ဒိယ ဗီဇာအတွက် တောင်ပန်းချက်ကို အစက ငြင်းပယ်ခံရသော်လည်း သူ့အား စေတနာ့ ကုသပေးမည့် ဆရာဝန်အဖွဲ့က အိန္ဒိယ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးအား တွီတာမှ တဆင့် ကြားဝင်စေ့စပ် အသာနားခံခြင်းကြောင့် ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ ရရှိခဲ့သည်။
အစ်မ Shamee နှင့်အတူ
သူသည် bariatric ခွဲစိတ်ကုသမှု၊astomach-shrinking bypass procedure တို့ကို ၎င်းလတွင် ဆိုက်ဖီး ဆေးရုံ [Saifee Hospital] ၌ ကုသမှုခံယူ၍ အလေးချိန် ၁၀၀ ကီလိုဂရမ် လျော့ချ နိုင်ခဲ့သည်။
သူ၏ မိသားစုဝင်က ကလေးပေါက်စချိန်တွင် ဆင်ခန္ဓာဆန်ရောဂါ ကုသမှုခံယူရာ ကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းများ ဝပွလာခဲ့ကာ မလှုပ်မရှားနိုင်အောင် ဖြစ်လာခဲ့သည်ဟု ဆရာဝန်အား ပြောပြသည်။
သူ မွမ်ဘိုင်မှ ထွက်ခွာချိန်တွင် ဆရာဝန်က သူ၏ အလေးချိန် ထပ် တစ်ဝက်လျော့ရမည်ဟု ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
သူ့ အစ်မ ရှာမီ အဟ်မဒ် သည် ဆေးရုံနှင့် အီမာန်၏ ကုသမှုနှင့် တိုးတက်မှု ဆိုင်ရာ ဆေးရုံနှင့် အငြင်းအခုံ ဖြစ်နေသည့်အချိန်တွင် သူတို့ မွမ်ဘိုင်မြို့မှ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။
အာဘူဒါဘီမြို့၏ ဗြုရ်ဂျေဆေးရုံမှ ဆရာဝန်များက သူမကို လမ်းလျှောက်နိုင်သည့်အထိ ကုသ ကူညီရန် ကန့်လန့်ခဲ့ရာမှ UAE သို့ ရောက်ရှိခဲ့လေသည်။
အီမာန်သည် သူ၏ မွေးနေ့ကို လွန်ခဲ့သောလတွင် မိသားစုဝင်နှင့် ဆရာဝန်များနှင့်အတူ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အလက်စ်ဇန်းဒြယားသူ အိမာန်သည် တစ်နေ့နေ့ ကမ်းခြေသို့ အလည်အပတ်သွားမည့် အိပ်မက်ရှိခဲ့သည်ဟု Indian Express သတင်းဌာနက အစ်မကို ကိုးကားပြီး ဖော်ပြခဲ့သည်။
Labels: well-known, world news, ကျန်းမာရေး